Mandraisa anjara amin'ny AfricaArXiv - AfricaArXiv
Tohanano ny tahirin-tsoratry ny AfricaArXiv preprint sy ireo olona ao ambadiky ny sehatra. Mba hamelomana ny serivisy AfrikaninaArXiv, hitahiry sy hampitombo ny vondrom-piarahamonina sy ny lampihazo, dia manome ny isam-batan'olona sy ny andrim-panjakana miaraka amin'ireto fomba manaraka ireto izahay mba handraisana anjara ara-bola amin'ny asantsika.
Isika ny fandaniantsika:
fananganana sy fikojakojana ny lampiran'ny AfricaArXiv
saram-serivisy (fampiantranoana tranonkala sy fiaraha-miasa serivisy hafa ohatra amin'ny ORCID, OSF,…)
fitsangatsanganana sy fanolorana ny fihaonambe - incl. fandaniana mifandray amin'ny Visa sy trano fonenana
Ny fanampiana ara-bola rehetra azonay dia atokana ho an'ny tanjona na mihoatra ny tanjona voalaza etsy ambony. Miresaka momba izay vola tokony homena anao mba hifandraisanao aminay hatrany info@africarxiv.org.
Mandefasa fanampiana ara-bola amin'ny alàlan'ny M-Pesa ny + 254 (0) 716291963
amin'ny alalan'ny Liberapay azonao atao ny manohana ny asanay amin'ny fandraisana anjara miverimberina. Ny fandoavam-bola dia tsy misy kofehy mamatsy ary ny fanomezana dia voafetra amin'ny € 100.00 isan-kerinandro isan-kerinandro ho an'ny mpamatsy vola mba tsy hampisy hery.
Read more amin'ny libapay.com/about/